မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာနေရပေမယ့် ညီမလေးပျော်ရွှင် နေတာကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်မိကြောင်း ပြောလာတဲ့ မေ…… – Cele Oscar
မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာနေရပေမယ့် ညီမလေးပျော်ရွှင် နေတာကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်မိကြောင်း ပြောလာတဲ့ မေ……
June 13, 2021 By L YC Celebrity
Miss Universe Myanmar အဖွဈ နဲ့ တိုငျးတပါးမှာ သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျပွီး အမိ မွနျမာပွညျ ကို ပွနျလာဖို့ မလှယျတော့ တဲ့ သူဇာဝငျ့လှငျ ဟာ လတျတလောမှာတော့ အမရေိမှာ နထေိုငျပွီး မျောဒယျ အဂေငျြစီ တဈခု မှာ ဝငျရောကျ လုပျကိုငျ နခေဲ့ ပါပွီ။ ဒီနေ့ မှာလညျး ကနျဒီက လော့အိနျဂလြိဈ နိုငျငံက Beverly Hills မွို့မှာ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံရိပျလေး ကို လူမှု့ ကှနျရကျမှာ ဝမြှေခဲ့ပွီး နောကျ အမဖွဈ သူမဟော ” ငါရောကျ ဖူးခငျြတဲ့ နရောလေး.. ပြျောနတော မွငျတော့ ဝမျးသာပါတယျ. တို့ဝရမျးပွေး ဘဝက လှတျတဲ့ တ နမှေ့ ပွနျဆုံ ကွစို့ တို့ ဖနျမလီ ” ဆိုပွီး ဝငျရောကျ မှတျခကျြ ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီမှတျခကျြလေး ကို မွငျကွတဲ့ ပရိသတျတှဟော စိတျမကောငျး ဖွဈပွီး အားတငျး ထားဖို့နဲ့ ဘေးကငျးစေ ကွောငျး ဆုတောငျး ပေးခဲ့ ကွပါတယျ။
အမဖွဈ သူ ရဲ့ မှတျခကျြကို ” Miss you ဒီမှာ လညျး passport ဖကျြခံရ တယျဆိုလား” ဆိုပွီး ကနျဒီက ပွနျလညျ မှတျ ခကျြပေးခဲ့ပါတယျ။ အမဖွဈသူ မဟောလညျး ပွညျသူ တှနေဲ့ တဈသားတညျး ရပျတညျခဲ့ တာကွောငျ့ (၅၀၅) (က) နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံရပွီး ဘေးလှတျရာ ကို တိမျးရှောငျ နရေသလို ညီမ ဖွဈသူ ကနျဒီဟာ လညျး တ ကမ်ဘာလုံးက ကွညျ့နတေဲ့ Miss Universe စငျမွငျ့ ထကျမှာ မွနျမာ့ အရေးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတျ ဖျောခဲ့တာ ကွောငျ့ မွနျမာပွညျ ကို ပွနျလာဖို့ အဆငျမပွနေိုငျသေး ပါဘူး။ ဒီလို အခကျအခဲ တှကေိုယျစီနဲ့ ရငျဆိုငျနေ ရတဲ့ ညီအမ နှဈယော ကျ ကို ပရိသတျတှကေ အားပေး စကားပွောခဲ့ ကွပါတယျ။
မွနျမာပွညျ အတှကျ ရောငျနီလာမယျ့ နရေ့ကျ တှရေောကျရငျ ပွညျသူတှေ ရဲ့ ဆန်ဒနဲ့ထပျတူ ကပြွီး ပွညျသူတှေ ဖကျ ကရပျတညျ ပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှငျ တိုငျးကို ပွညျသူတှေ က လကျကမျးကွိုပွီး အကောငျးဆုံးတှေ ပွနျပေးဖို့ အဆငျသငျ့ ပါပဲ။ ရဲရငျ့ပွီး ဆုံးဖွတျ ခကျြပွတျသားတဲ့ မေ နဲ့ ကနျဒီလို သမီးလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မိဘအတှကျတော့ တကယျ့ ကိုဂုဏျယူစ ရာဖွဈနမှော ပါ။ ပရိသတျ တှရေဲ့ခဈြခွငျး မတ်ေတာ ကွောငျ့ ညီအမနှဈယောကျလုံး ဘေးကငျးပွီး ပိုမိုအောငျမွငျပြျောရှငျတဲ့ ဘဝတှကေို ကိုယျစီ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျး ပေးပါတယျ။ဖတျရှု့ပေးသူ တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Thu Zar Wint Lwin’s FB Acc
Miss Universe Myanmar အဖြစ် နဲ့ တိုင်းတပါးမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အမိ မြန်မာပြည် ကို ပြန်လာဖို့ မလွယ်တော့ တဲ့ သူဇာဝင့်လွင် ဟာ လတ်တလောမှာတော့ အမေရိမှာ နေထိုင်ပြီး မော်ဒယ် အေဂျင်စီ တစ်ခု မှာ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် နေခဲ့ ပါပြီ။ ဒီနေ့ မှာလည်း ကန်ဒီက လော့အိန်ဂျလိစ် နိုင်ငံက Beverly Hills မြို့မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေး ကို လူမှု့ ကွန်ရက်မှာ ဝေမျှခဲ့ပြီး နောက် အမဖြစ် သူမေဟာ ” ငါရောက် ဖူးချင်တဲ့ နေရာလေး.. ပျော်နေတာ မြင်တော့ ဝမ်းသာပါတယ်. တို့ဝရမ်းပြေး ဘဝက လွတ်တဲ့ တ နေ့မှ ပြန်ဆုံ ကြစို့ တို့ ဖန်မလီ ” ဆိုပြီး ဝင်ရောက် မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှတ်ချက်လေး ကို မြင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး အားတင်း ထားဖို့နဲ့ ဘေးကင်းစေ ကြောင်း ဆုတောင်း ပေးခဲ့ ကြပါတယ်။
အမဖြစ် သူ ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ” Miss you ဒီမှာ လည်း passport ဖျက်ခံရ တယ်ဆိုလား” ဆိုပြီး ကန်ဒီက ပြန်လည် မှတ် ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမဖြစ်သူ မေဟာလည်း ပြည်သူ တွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့ တာကြောင့် (၅၀၅) (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံရပြီး ဘေးလွတ်ရာ ကို တိမ်းရှောင် နေရသလို ညီမ ဖြစ်သူ ကန်ဒီဟာ လည်း တ ကမ္ဘာလုံးက ကြည့်နေတဲ့ Miss Universe စင်မြင့် ထက်မှာ မြန်မာ့ အရေးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ် ဖော်ခဲ့တာ ကြောင့် မြန်မာပြည် ကို ပြန်လာဖို့ အဆင်မပြေနိုင်သေး ပါဘူး။ ဒီလို အခက်အခဲ တွေကိုယ်စီနဲ့ ရင်ဆိုင်နေ ရတဲ့ ညီအမ နှစ်ယော က် ကို ပရိသတ်တွေက အားပေး စကားပြောခဲ့ ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည် အတွက် ရောင်နီလာမယ့် နေ့ရက် တွေရောက်ရင် ပြည်သူတွေ ရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူ ကျပြီး ပြည်သူတွေ ဖက် ကရပ်တည် ပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှင် တိုင်းကို ပြည်သူတွေ က လက်ကမ်းကြိုပြီး အကောင်းဆုံးတွေ ပြန်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ပါပဲ။ ရဲရင့်ပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ပြတ်သားတဲ့ မေ နဲ့ ကန်ဒီလို သမီးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မိဘအတွက်တော့ တကယ့် ကိုဂုဏ်ယူစ ရာဖြစ်နေမှာ ပါ။ ပရိသတ် တွေရဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ကြောင့် ညီအမနှစ်ယောက်လုံး ဘေးကင်းပြီး ပိုမိုအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝတွေကို ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။ဖတ်ရှု့ပေးသူ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Thu Zar Wint Lwin’s FB Acc
ပြည်ပသို့ ရောက်သွားပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ကြောင်း ပြသလာတဲ့ ယုဇန…
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များအတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းများ ပေါ်ထွက်လို့ လာပါပြီ,,,,,,
တောတောင်တွေထဲမှာ အေးမြလှတဲ့ဆောင်းရာသီကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း…..
ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် နောက်ထပ်ပုံလေးတင်ပေးလာပြန်တဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါက်……..
အမေရိကန် ရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး…….
အိမျပျေါကနဆေငျးပေး ရတော့မယျ့သားအမိနှဈယောကျကို ထောကျပံ့ကူညီလိုကျပွနျတဲ့ မိုးစကျ…..
တောသူမလေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး အားပေးစကားဆိုလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ……